Victoria’s Secret Fashion Show ကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်မည် – Entertainment – International Celebrity – Duwun
Victoria’s Secret Fashion Show ကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်မည်
Ei 2017-08-31 10:21:15.0, 2017-08-31 10:21:15.0
ယခုနှစ် Victoria’s Secret Fashion Show ပြုလုပ်မယ့် နေရာ၊ အချိန်နဲ့ ပါဝင်မယ့် မော်ဒယ်တွေစာရင်းကို သိရှိရပါပြီ။
နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး ဖက်ရှင်ရှိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Victoria’s Secret Fashion Show ကို ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး မော်ဒယ် ၅၀ ခန့်က Victoria&apos;s Secret ရဲ့ အတွင်းခံအသစ်တွေကို ဝတ်ဆင်ပြသွားမှာပါ။
“Ni hao, China! This year’s #VSFashionShow is headed to Shanghai. Watch it Nov 28, 10/9C on @CBS. (sic)” လို့ Victoria’s Secret ရဲ့ တရားဝင် တွစ်တာအကောင့်မှာ ရေးထားတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။
Victoria&apos;s Secret ရဲ့ ၂၀၁၇ ရှိုးပွဲမှာ ပါဝင်မယ်လို့ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် စူပါမော်ဒယ် ဂျီဂျီဟက်ဒီးကလည်း ဖွင့်ဟခဲ့ပြီးပါပြီ။
မနှစ်က Victoria&apos;s Secret ရှိုးမှာ သူမပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို မျှဝေရင်း ဒီနှစ်မှာလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်း ဂျီဂျီက သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်ကနေ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်ကစတင်လို့ Victoria&apos;s Secret ရဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်လာတဲ့ ဂျီဂျီရဲ့ညီမငယ် ဘယ်လာဟက်ဒီးကလည်း Victoria&apos;s Secret ဖက်ရှင်ရှိုးအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ကြောင်း အင်စတာဂရမ်ကနေ ပြောခဲ့ပါတယ်။
စူပါမော်ဒယ်များဖြစ်တဲ့ အလက်ဇန္ဒားအမ်ဘရိုစီယို၊ အန်ရီယာနာလိုင်မာ၊ လီလီအဲဒရက်ဂ်ျတို့အပြင် မကြာသေးမီကမှ ကလေးမီးဖွားပြီဖြစ်ကြတဲ့ ဘက်ဟာတီပရင်စလိုနဲ့ ကန်ဒစ်ဆွန်းနီပိုးလ်တို့ကိုလည်း Victoria&apos;s Secret ရဲ့ရှိုးပွဲစင်မြင့်ပေါ်မှာ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Victoria&apos;s Secret ဖက်ရှင်ရှိုးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂုဏ်သတင်းအကြီးဆုံး ဖက်ရှင်ရှိုးကြီးဖြစ်ပြီး စူပါမော်ဒယ်များစွာ ပါဝင်ပြီး နှစ်စဉ် ကျင်းပတဲ့ ဖက်ရှင်ရှိုးကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲက ပါရီမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
YouTube မှာ စတင်တဲ့နေ့မှာတင် ကြည့်ရှုသူ ၄၃.၂ သန်း ရှိသွားပါတယ်။